XtraDeb - Ubuntu အတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများ PPA သိုလှောင်ရုံ | Linux မှ
ငါတို့ပဲလား အသုံးပြုသူများသည် အချို့ဗားရှင်း၏ Ubuntu ကိုသို့မဟုတ်အချို့ ဖြူ အဖြစ်ကဆင်းသက်လာ Mint, သို့မဟုတ်သဟဇာတ debian o MX, သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့် GNU / Linux Distroအားလုံး Linuxero ပါ မင်းပုံမှန်လိုချင်တာ Native repositories အဖြစ်များစွာသော၏အများဆုံးလက်ရှိဗားရှင်းဆောင်ခဲ့ရမည် application များနှင့်ဂိမ်းများ။ သို့သော်များသောအားဖြင့်ဤအရာသည်မဟုတ်ပါ၊ မကြာခဏအသုံးပြုတတ်သည် ပြင်ပသိုလှောင်ရုံများ, ကဲ့သို့, XtraDeb.
XtraDeb မကြာသေးမီကဖန်တီးခဲ့သည် PPA ကို Ubuntu အတွက်သိုလှောင်ခြင်းနှင့်လိုက်ဖက်ခြင်းသို့မဟုတ်လိုက်ဖက်ခြင်း, ကြီးထွားဖို့စတင်နေပြီဖြစ်သောဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နှင့်အလွန်လက်ရှိ applications များနှင့်ဂိမ်းများကို။
သူတို့ဟာ application လား၊ ဂိမ်းလားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူတို့ကိုရှိစေရန်နှင့်၎င်းတို့အားလက်ရှိ version တွင်aမှတဆင့်အသုံးပြုပါ တစ်ခုတည်းရုပ်သံလိုင်းတပ်ဆင်လူအများစုသိရှိပြီးအသုံးပြုရန်နှင့်၎င်းအတွက်အရေးကြီးသည် မြင်သာအောင်ကူညီ၊ ဖြန့်ဝေပါ ၎င်း၏ developer များ၏လုပျငနျး။ အထူးသဖြင့်ဘယ်အချိန်မှာ အားကစားပြိုင်ပွဲ ဒါကြောင့်တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကပြောပြီဖြစ်ပါတယ် အရေးကြီးသောareaရိယာ ငါတို့အစဉ်မပြတ်တိုးတက်လာရမယ်ရသော Linux ကို.
ဂိမ်း၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်အမှုအဘို့, က၏အမှုအဘို့, ကအဓိကအားရေတွက်မီ Ubuntu, ဆင်းသက်လာခြင်းနှင့်သဟဇာတနှင့် Playdeb, ဒါပေမယ့်ငါတို့ရှိသမျှသည်သိသည်အတိုင်း, ဒီခေါင်းစဉ်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်စပ်ထုတ်ဝေတွင်တွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့တူညီသောတောင်ကုန်း,
GetDeb နှင့် PlayDeb သို့နှုတ်ဆက်သည်။ အနည်းဆုံးဖြစ်သည်
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အမြဲရှိသည် ဂန္ထဝင်နည်းလမ်း ငါတို့သုံးနိုင်သည် အထုပ်မန်နေဂျာ ငါတို့လုပ်နိုင်တယ် GNU / Linux Distros una Distro Gamer များ။ အောက်ပါကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်စပ်ပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း:
1 XtraDeb - အဆင့်မြှင့်တင်ထားသောဂိမ်းများနှင့်အသုံးချပရိုဂရမ်များပါရှိသည်
1.1 XtraDeb ဆိုတာဘာလဲ။
1.2 XtraDeb ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
1.2.1 Ubuntu နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျ၌
1.2.2 Debian နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျတွင်
XtraDeb - အဆင့်မြှင့်တင်ထားသောဂိမ်းများနှင့်အသုံးချပရိုဂရမ်များပါရှိသည်
ကျွန်တော်အရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲ XtraDeb ဟာ \_ t PPA ကို Ubuntu အတွက်သိုလှောင်ခြင်းနှင့်လိုက်ဖက်ခြင်းသို့မဟုတ်လိုက်ဖက်ခြင်း, ကြီးထွားဖို့စတင်နေပြီဖြစ်သောဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နှင့်အလွန်လက်ရှိ applications များနှင့်ဂိမ်းများကို။ သို့သော်သင်၏ site ပေါ်တွင် LaunchPad တွင်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အောက်ပါအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြထားသည် -
"ဤစီမံကိန်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာလက်ရှိ Ubuntu ဗားရှင်းများအတွက်အပိုဆော့ဝဲလ်အထုပ် (နှင့်အချို့သောအတိုင်းအတာအထိမွမ်းမံမှုများ) ကိုသူတို့ရရှိနိုင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ XtraDeb သည်တရားဝင် Ubuntu အတွက်လက်ရှိ software Ubuntu အတွက်နောက်ဆုံးပေါ် software package များကိုထောက်ပံ့ရန်ရည်ရွယ်သည်။ XtraDeb repositories သည်တရားဝင် repositories ကိုတိုးချဲ့သည်၊ အပိုဆောင်း package များနှင့်အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်ရှိပြီးသား version များဖြစ်သည်။"
သင့်ဖန်ဆင်းရှင်၊ Jhonny Oliveiraသင်တစ် ဦး ပြုစုနေကြသည် အလွန်ကောင်းတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများ ကျွန်တော်တို့ကိုသတိရစေသည့်၎င်း၏ repositories တွင်ပျောက်ကွယ်သွားသည် Playdeb။ ယခု, ၏လယ်ပြင်၌ အားကစားပြိုင်ပွဲ, repository ကိုအောက်ပါကမ်းလှမ်းကဆိုသည် ဂိမ်းစာရင်းအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကြီးထွားလာလိမ့်မည်။
ထိုအ applications များ၏လယ်ပြင်၌ကအောက်ပါပေးထားပါတယ် အက်ပလီကေးရှင်းစာရင်း:
XtraDeb အတွက် repository ဖိုင်တစ်ခုဖန်တီးပါ
အောက်ပါအကြောင်းအရာ (ဆော့ဖ်ဝဲအရင်းအမြစ်) ထည့်ပါ:
ဒီအဆင့်တွေအားလုံးပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုကို install လုပ်နိုင်ပါတယ် XtraDeb အက်ပ်များနှင့်ဂိမ်းများအဲဒါကိုတစ် ဦး အပေါ်ပြုမိသောအခါ, အကောင့်သို့ယူပြီး Debian Distro နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျမှီခိုရသည့်ပြproblemsနာများကြောင့် application တော်တော်များများသည် install လုပ်ရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စတွင် Urban Terror 4.3.4 ဂိမ်း ကိုယ့်အကြောင်း GNU / Linux Distro၎င်းသည်မည်သည့်မှီခိုမှုပြproblemsနာကိုမျှမပေးခဲ့ပါ။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «XtraDeb», Ubuntu အတွက် PPA Repository နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျသို့မဟုတ်သဟဇာတ, ကြီးထွားလာခြင်း, ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နှင့်အလွန်လက်ရှိ applications များနှင့်ဂိမ်းများကိုပူဇော်; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » XtraDeb - Ubuntu အတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများ PPA သိုလှောင်ခြင်း
Youtube-dl ကို“ ppa: xtradeb / apps” ၏ repo တွင်မဖော်ပြပါ။ (ယနေ့၊ ၁၂/၈/၂၀၂၀၊ youtube-dl သည် ၂၀၂၀-၁၀.၀၇ ဗားရှင်းတွင်ဖြစ်သည်) မတိုင်မီ update လုပ်) youtube-dl သည်အမြဲတမ်းအဆင့်မြှင့်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Megamario အေးဆေးပါပဲ !!
ဟိုဆေး Juan နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းသည်သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းများအားလုံးကိုအလွန်ကောင်းမွန်သောလုံ့လဝီရိယရှိရှိ update လုပ်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။